Taageerada xulufada dowlada oo aad hoos ugu dhacday | Somaliska
Taageerada xulufada dowlada oo aad hoos ugu dhacday
Haddii maanta doorashada Sweden la qaban lahaa ayaa xulufada dowlada si weyn looga adkaan lahaa. Afti baaris cusub oo ay samaysay shirkada SIFO ayaa soo bandhigtay in guud ahaan cododka ay helayaan xisbiyada ku mideysan dowlada ay tahay 36% oo keliya, halka mucaaradka ay taageeradooda gaadhay 52,8%.
Xisbiga Centerpartiet ayaa qaasatan dhulka galay iyadoo ay u muuqato in uusan baarlamaanka gali doonin doorashada soo socota. xisbiga ayaa helay 2,8% oo keliya, taasoo ah cododkii ugu yaraa ee ay helaan.
Taageerada hoos u dhacday ee xulufada dowlada oo ay ku mideysan yihiin xisbiyada kala ah Moderaterna (M), Folkpartiet (FP), Centerpartiet (C) iyo KristDemokraterna (KD) ayaa muujinaysa sida aysan shacabka Sweden ugu qanacsanayn shaqadooda.
Dhinaca kale, xisbiga cunsuriga ah ee SD ayaa helay 9,5%.
February 16, 2014 at 12:28
wali waxaa muuqata in dad badan isku qaldayaan magacyada (S) iyo (SD)
Arintaan waxaa sababay ajanabiga iyo qaxootiga o kusoo batay sweden….qaxootigii waala nacay.
February 16, 2014 at 23:46
ajaanib qofba marabto markii runta laka hadlo kasoo qaad wadankenii soomaliya hadaan qof cadaan ku arakno waan bur bur sanenaa hadesan xita dana gaar naka laheen marka layaab malahan dadka swedishkana sido kale ajaanib madoonayaan ee aallloooow nabad nooka dhig waxa na dhibaayo dhulka alla hala gooyo in aan qaxooti dawarsano dadka naku qasbay ilahoow naka qabo